Faa'iidada ey Soomaalidu Bulshada u Leedahey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Hasse Holmberg / SCANPIX
Faa'iidada ey Soomaalidu Bulshada u Leedahey
La daabacay onsdag 23 maj 2012 kl 10.16
Dhalashada iyo soo-galootiga oo kor u kacay haba ugu wacnaatee tirada soomaalida oo kor u sii kacaya ayaa sababay kor u kaca tirada bulshada iswiidhishka oo ku socota xawli ka badan sidii la filayay. Iyadoona la qiyaasayo in ugu dambeeyn sannadka 2018 ay tirada bulshada dalkani gaari doonto 10 malyuun oo ruux, sida ku cad war-bixin ay soo saartay hayadda tira-koobka ee SCB.
- Midda iminka xiisaha lihi waxay tahay xawliga ay ku socoto kor u kaca tirada bulshada. Muddo 14 sannadood gudahood ah ay tirada bulashada dalku kordhi doonto hal malyuun oo ruux, sida ay sheegtay Lena Lundkvist oo ka howl-gasha hayadda SCB, halka horraantii uu koro noocaasiya u qaatay muddo 35 sannadood ah, sida ku cad war aannu ka soo xiganay hayadda wararka ee TT.
Lena Lundkvist ayay ka cajabisay xaaladda ah: in dhalmmadu kor u sii kaceeyso iyada oo isla-markaana ay ay sii kordheeyso da'da lagu dhalo ilmaha ugu horeeya.
- Horay looma heysan in dhallaan sidaa u tira-badan lagu dhali karo maadaama goor dambe la bilaabey dhalliinka, halkaa middaa ay iminka beenoowday.
M ahan oo keliya waxyaabaha mustaqbalka is bedelaya oo keliya tirada bulshada oo kor u kacda, waxaa sidoo kale is-bedel uu ku dhacayaa tirada da'aha kala duwan.
- Waxaa hoos u dhici doonta tirada da'aha u dhexeeya 20 illaa iyo 64, halka ey kor u kici doonaan tirada dadyowga 65-jirka ah. Waxaa sidoo kale la qiyaasayaa inay halka ey iminka joogto ku sugnaan doonto tirada da'da 0 illaa iyo 19.